မြန်မာ ပြည် ကျရှုံး နိင်ငံ ( Failed State of Myanmar ) | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« DOUBLE TALK BY the MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA and Pharmaceutical Association
မြို့လယ်ခေါင်မှာ တုတ်တွေ ဓားတွေ ကိုင်ပြီး ကုလားတွေကို ဆဲနေကြတာ အမျိုးကို ချစ်လို့ ဆဲနေကြတာပါတဲ့ ချာ မ »
မြန်မာ ပြည် ကျရှုံး နိင်ငံ ( Failed State of Myanmar )
ကျရှုံး နိင်ငံ ( Failed State )
နိင်ငံတော်ဆိုတဲ့စကား ဟာ ချီးပေါသေးပေါဖြစ်အောင်သုံးလာရင် အဲ့ဒီနိင်ငံဟာ မကြာခင် ကျဆုံးတော့တာပါပဲ။ နိင်ငံတော် အကြီး အကဲ ဆိုတာတွေဟာလဲ ကြိုးစင်ပေါ်တက်ကြရတော့တာပါပဲ။ ဖြုတ်ချခံထိတာတွေဖြစ်လာကြတော့တာပဲ။ဥပမာ မူဆိုလိုနီ ( အီတလီ၊နိကိုလိုင်ချောင်ချက်စကူး( ရူမေးနီးယား)၊ မားကိုစ် (ဖိလစ်ပိုင်)၊ ဦးနေ၀င်း ( မြန်မာ) ၊ဆဒန်ဟူစိန် ( အီ၇တ်) တို့ ဖြစ်ကြတယ်။
တကယ်တော့ နိင်ငံတော်ဆိုတဲ့အဓိပါယ်ဟာလေးနက်တယ်။ မြင့်မြတ်တယ်။ လုံခြုံမှု၊ တိုးတက်မှု၊ေ ပျှာ်ရွင်မှုသုခ
တွေရှိနေအောင် လုပ်နိင်တဲ့ အစိုးရကိုသာနိင်ငံတော်လုို့ သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။ နိင်ငံတော်ဆိုတဲ့ဝေါဟာရအဓိပါယ်ကို
ဖွင့်ဆိုပေးခဲ့သူကတော့ သုခမိန် မားစ်ဝိုင်ဘာMaX Weber ဖြစ်တယ်။ သူက နိင်ငံတော်ဆိုတာ ‘’amonopoly the legitimate use of physical force within its borders ‘’ သတ်မှတ်ထားတဲ့နယ်မြေအတွင်းမှာ အင် အားကိုတရားဝင်အသုံးပြုခွင့်ရှိတာလုို့ဆိုတယ်။ မှန်တယ်။ ဒီနေရာမှာအင်အားကိုတရားဝင်အသုံးပြုခွင့်ဆိုတာဘာလဲလုို့မေးစရာရှိတယ်။ ရွေးကောက်တဲ့အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကိုယ်နည်းကိုယ်ဟန် နဲ့အစိုးရ သို့ မဟုတ် နိင်ငံတော် လုို့ ခံယူထားတဲ့ အစိုးရ (De facto Government) ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ပြည်သူက တရားဝင်ဥပဒေအရ ရွေးကောက်ထားတဲ့ အစိုးရ ( De Jury Government ) ဖြစ်ဖြစ် အင်အားကို လုိုအပ်တဲ့အခါမှာ သုံးစွဲကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ တရားမ၀င် တဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေရဲအင်အားသုံးစွဲမှုတွေဟာတရားမ၀င်တဲ့ရလဒ်တွေပဲထွက်လာကြတယ်။
သူတို့ဟာ သူတို့ ကိုယ်သူတို့ တရားဝင် လုို့ ထင်လာတယ်။ နိင်ငံတော်လုို့ ထင်လာတယ်။ သူတို့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာမှန်ကန်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်၊ ဘာဖြစ်လုို့ လဲ ဆိုတော့ နိင်ငံတော်နဲ့သူတို့ ဟာ ခွဲခြားမမြင်နိင်တော့ပဲထင်ယောင်မှား ( Delusion ) ဖြစ်လာလေ့ရှိကြတယ်။သူတို့ ရဲလုပ်ရပ်တွေဟာတရားဝင်တယ်လုို့ထင်ပေမဲ့ တကယ်က တရားဝင်မဟုတ်ကြတော့ဘူး။
တရားမ၀င်မှု တွေ များလာတဲ့အခါမှာတော့နိင်ငံတော်တွေဟာ ကျဆုံးနိင်ငံအဖြစ် နိဂုံးချုပ်ရတော့တာပါပဲ။ အဘယ်မည်သောနိင်ငံကို ကျဆုံးနိင်ငံ ဟုခေါ်ဆိုပါသနည်း။
ကျဆုံးနိင်ငံ ( Failed State )
Failed State ကို တော့ ကျရှုံး နိင်ငံတော်လုို့ဘာသာပြန်လုို့ ရနိင်ပါတယ်။ လူတယောက်မအောင်မြင်ပဲကျရှုံး ခဲ့ရင် သူ့ ပတ်ဝန်းကျင့် သူဘာလုို့ဒီလိုဖြစ်ရသလဲ ဆိုတာကို ပတ်ဝန်းကျင် က ပြောကြဆိုကြတယ်။
ဝေဖန် ကြတယ်။ နိင်ငံတော်တခုဟာလဲ အောင်မြင်မှုတွေမရပဲအရှုံးတွေနဲ့ ရင် ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအရှုံးတွေပဲ ထပ်ခါတလဲ လဲ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ နိင်ငံကိုFailed State လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီး နိင်ငံတွေလွတ်လပ်ရေးရလာကြပေမဲ့တချို့ နိင်ငံတွေဟာ နိင်ငံရေးစီးပွားရေး ကပ်တွေကိုရင်ဆိုင်ရပြီး မအောင်မြင်ပဲဖြစ်လာကြတယ်။ ဆိုးဆိုးဝါးလူမှုအနိဌာရုံတွေ ဖြစ်နေကြတယ်။
ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ ။ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကို ကျရှုံးနိင်ငံလို့ သတ်မှတ်ကြမလဲ ဆိုတာပညာရှင်တွေစဉ်းစားလာကြတယ်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်ချမ်းရေး ရံပုံငွေအဖွဲ့က Fund for Peace ပညာရှင်တွေကို ငှားရမ်းပြီး နိင်ငံပေါင်း ၁၇၈ နိင်ငံကို သုတေသနပြုစေခဲ့ပါတယ်။ ကျရှုံးနိင်ငံဇယား (FailedState Index – FSI ) ကို တီထွင် နိင်ခဲ့တယ်။
အချက် ၄ ချက်
ကျရှုံးနိင်ငံ ဖြစ်မှုက အချက် ၄ ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ဒီ ၄ချက် ကိုက်ညီလာရင် ကျရှုံးနိင်ငံစာရင်း အဖြစ် နိင်ငံတကာက သတ်မှတ်လာကြပါတယ်။ ဒီလေးချက်ကတော့က
၁။ နယ်မြေကို မထိမ်းသိမ်းနိင်ခြင်း (Loss of control of its territory, or ofthe monopoly on the legitimate use of physical force therein )
· ၂။ တရားဥပဒေ ဆိုးမိုးမှုကင်းမဲလာခြင်း နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို တညီတညွတ်တည်း မပြုလုပ်နိင်တော့ခြင်း Erosion of legitimate authority to make collective decisions
· ၃။ ပြည်သူတွေအတွက် ၀န် ဆောင်မှုတွေကို အစုိုးရက မပြုလုပ်နိင်တော့ခြင်း ( Inability to provide public services )
· ၄။ နိင်ငံတကာမိသားစုနဲ့ လိုက်လျောညီထွေမဆက်ဆံလာနိင်ခြင်း Inability to interact with other states asafull member of the international community )
ဒီစံညွန်း ၄ ချက်အရ မြန်မာ ပြည်ဟာ ၃ ချက်လောက် ကိုက် ညီနေတာကိုတွေ့ ရတယ်။
တိုင်းရင်းသား နယ်တွေကို ထိုးစစ်ဆင်နေတာက နယ်မြေတည်ငြိမ် အေးချမ်းမှုမရှိတော့
တာကို ပြနေတယ်။ တိုင်းရင်းသားဒေသ တွေ အုပ်ချုပ်ရေး မလုပ်နိင်တာသန်းခေါင်းစရင် မကောက် နိင်တာ၊ ဖွင့်ဖြိုးရေး တွေကိုမလုပ်နိင်တာ ခဲ့ပါဘူး။ ပြည်တွင်း စစ်ဖြစ်ပွားနေတာ
နစ်ပေါင်း ၅၀ နီးပါး ( ရာစုနစ်တ၀က် ) မက ၇ှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
တရားဥပဒေ ဆိုးမိုးမှု မရှိတာကတော့ အထူးပြောစရာမလိုလောက်အောင်ကို ဖြစ်နေတယ်။
ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အရွေးခံရပြီးနောက်
ပထမဆုံးသူယူခဲ့တာဝန် က တရားဥပဒေဆိုးမိုးရေး ကော်မရှင် မှာ ဥက္ကဌ တာဝန်ယူခဲ့ပေမဲ့
မြန်မာ ပြည်ရဲ့ တရားစီရင် ရေးစနစ် ဟာတိုးတက်မှုမရှိပဲဖြစ်နေပါတယ်။ ကိုထင်ကျော်၊ ကိုနေမျိုးဇင် နဲ့ မနော်အုန်းလှတို့တရားရုံးထုတ် ရက်တွေမှာသူတို့ ရဲ့ရင်ဖွင့်သံတွေက
မြန်မာ တရားရေးစနစ်ကြီးတခုလုံးကို လှစ်ဟာပြနေကြတယ်။
လက်ရှိအစိုးရဟာကျမ္မာရေး ပညာရေး၊ သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေး ၊ ရေမီး ၇ရှိရေး၊ တရားဥပဒေ ဆိုးမိုးရေးဆိုတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေလုပ်ငန်းတွေဟာ အလုံးစုံ ဆုတ်ယုတ် လာနေတာပဲ၇ှိနေပါတယ်။ တိုးတက်
လာတဲ့လက္ခဏာကင်းမဲ့သွား ပါတယ်။ ၁၉ ၉ ၇ခုနစ် အမေရိကန် က စီးပွားရေးပိတ်စို့ ခံရတာ
ကုလသမဂမှာ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်လူအခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုမှတ်တမ်းတွေဟာ ဒီကနေ
ဦးသိန်းစိန် လက်ထက်မှာလဲ တိုးတက်မှုမရှိလာခဲ့တဲ့ နိင်ငံတကာအသင်းအပင်း ပေါင်းဆုံ က
ဝေဖန် ပြစ်တင်မှုတွေကို တောက်လျောက်ခံနေရတယ် မကြားသေးမီကပဲ ကုလသမ္ဂကိုယ်စားလှယ် ယန်ဟီးလီး က မြန်မာ ပြည်ရဲ့ နိင်ငံရေး စီးပွားရေးလှုမူရေးအခြေအနေတွေဟာ ဆုတ်ယုတ်နေဆဲပဲ ဖြစ်တယ်လုို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ရလဒ်ကတော့ နိင်ငံတောမှာ တရားဥပဒေ မရှိမှု၊ ရာဇ၀တ်မှုတွေထူပြောလာမှု၊ဒုက္ခသည် တွေ ထွက်လာမှု၊ နိင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှု၊ လူအခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှု ၊ စီးပွားရေး ပျက်စီးယိုယွင်းမှု စတဲ့ အခြေအနေဆိုးတွေ လူမှုဒုက္ခကပ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာတော့တာပဲ လုို့ဆိုတယ်။ ကျဆုံးနိင်ငံ ဖြစ်လာနေပြီဆိုရင်လူမှုရေးလက္ခာ ဆိုး အချက် ၁၂ ချက်ကို ပြသလာတယ် လုို့ပညာရှင်တွေက ဆိုပါတယ်။ ဒါတွေကတော့
လက္ခဏာ ၁၂ ချက်-
၁။ သန်းခေါင်စရင်း ပြသနာ တွေစတင်တက်လာတယ် ။( Mounting Demographic Pressures )
၂။ ဒုက္ခသည်တွေ အစုလုိုက်အပြုံထွက်လာတယ်။ သို့ တည်းမဟုတ် ပြည်တွင်းမှာလူတွေအဓမပြောင်းရွေ့နေထုိုင်ရတာတွေဖြစ်လာတယ်။ (Massive Movement of Refugees or InternallyDisplaced Persons)
၃။ အုပ်စုဖွဲ့ ရမ်းကားမှုတွေ ဖြစ်လာတယ် (Vengeance Seeking Group Grievance ) ။
၄။ လူတွေအစုလိုက်အပြုံလုိုက်ပြောင်းရွေ့ မှုတွေဖြစ်လာတယ်။ (Chronic and Sustained Human Flight ) မြန်မာပြည်မှာတော့နယ်ကလူတွေရန်ကုန်ကိုစုပြုံ တက်လာကြရတယ်။မလေးရှား၊ထိုင်းနဲ့ တရုပ်ဖက်ကို ထွက်နေကြရတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။)
၅။ စီးပွားဖွင့်ဖြိုးမှုမညီမျှမှုတွေဖြစ်လာတယ် ( Uneven EconomicDevelopment) ။
၆။ လူတွေဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ နိင်ငံစီးပွားရေး ချွတ်ခြုံကျမှု(သရောကြီးခိုင်မှု) တွေဖြစ်လာတယ် (Poverty, Sharp or Severe Economic Decline) ။
၇။ တရားဝင်မှုအားနည်းလာတယ်(Legitimacy of the State)
၈။ ပြည်သူဝန် ဆောင်မှုတွေ ညံဖြင်းလာတယ် ( Progressive Deterioration of Public Services)) ။
၉ ။ လူအခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုတွေများလာတယ်။ (Violation of Human Rights and Rule of Law) ။
၁၀။ လုံခြုံရေးအစီမံ၊ ကာဗျူး၊ မာရှယ်လောလို့ဟာတွေမကြာခနထုတ်ပြန်လာတတ်တယ်။ (Security Apparatus)
၁၁။ အာဏာရ နိင်ငံရေးပါတီ အတွင် အုပ်စုဖွဲ လာကြတယ်(Rise ofFactionalized Elites )။
၁၂။ နိင်ငံတကာ အသင်း အပင်းတွေ ၀င်ရောက် ပတ်သက်လာရတယ်။(Intervention of External Actors)
မြန်မာဟာ ထို စရင်းဝင်နေပြီ
၂၀၁၃ ခုနစ် ကျဆုံးနိင်ငံဇယား မှာ ဆူဒန် နိင်ငံဟာ တစ်ဖြစ်နေတယ်။ကျဆုံးနိင်ငံတွေရဲ့ ကို ကမ္ဘာမြေပုံမှာအမဲ နဲ့ဆေးခြယ်ထားတယ်။ ဒီထဲမှာ မြန်မာနိင်ငံဟာပါဝင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း တမျိုးသားလုံးကို အသိပေးလုိုပါတယ်။
လေ့ကျင့်ရန် မေးခွန်းများ –
Fail State လို့ သတ်မှတ်ထား တဲ့အချက် ၄ ချက်က ဘာတွေလဲ ။
De Facto Government ဆိုတာဘာလဲ
De Jury Government ဆိုတာ ဘာလဲ
Fail State လက္ခာ ပြသ ချက် ၁၂ ချက်ကို သင် ပြောပြနိင်မလား။
သင် ပတ်ဝန်း ကျင် မှာ တွေ့ နေရတဲ့ Failed State လက္ခာဏာ တွေကို ဆွေးနွေး ပေးနိင်မလား။
ဖတ်ရှု့ သင့်သော စာအုပ်များ နဲ့စာတန်းများ
“Fragile States FAQ Number 6: What Does “State Fragility” Mean?”. the Fund for Peace. Retrieved 2015-01-04.
Patrick, Stewart (2007). “‘Failed’ States and Global Security: Empirical Questions and Policy Dilemmas”. International Studies Review (Blackwell Publishing)9(4): 644–662. doi:10.1111/j.1468-2486.2007.00728.x. 1079-1760.
Jump up ^ Braathen, Einar: Brazil: Successful country, failed cities? (NIBR International Blog 24.01.2011).
– Patrick, S. (2007) Failed’’ States and Global Security: Empirical Questions and Policy Dilemmas, International Studies Review 9, 644–662.
, C.T. (2010) Beyond the ‘failed state’: Toward conceptual alternatives. European Journal of International Relations, US Institute of Peace, Washington DC, USA.
=Kaplan, S. (2008) Fixing Fragile States. A new paradigm for development. Praeger Security International. US.
– Gros, J.G. (1996) Towardsataxonomy of failed states in the New World Order: Decaying Somalia, Liberia, Rwanda and Haiti, Third World Quarterly, 17(3), 455-472.
– Rotberg, R. (2004) When States fail. Causes and consequences. Princeton
University Press, US.
– Levitt, S. (2012), Why Nations Fail? The Origins of Power, Prosperity and Poverty. Profile Books, UK.
This entry was posted on March 2, 2015 at 8:42 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.